Gossip News Headlines
Results : 1 -6of 251
एजेन्सी, मुम्बई, २०७४ फाल्गुन ७, आईतवार
कर्णप्रिय छन् ‘लम्फू’ का गीतहरु (अडियो)
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७४ माघ १६, सोमवार
‘२.०’ को रिलिज पोस्टपोन्ड, अब प्रदीप आउलान् ?
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७४ माघ १५, आईतवार
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७४ मंसिर ४, सोमवार
यतिबेला चर्चा नायक अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘कृ’को मात्र छ । झण्डै डेढ वर्षपछि पर्दामा फर्किन लागेका कारण पनि उनी अभिनीत यो फिल्म छायांकन अगावैदेखि प्रतिक्षीत बनेको थियो । अनमोल पनि अब दर्शकको प्रतिक्षाको घडी लम्ब्याउन चाहन्नन् । बारम्बार प्रदर्शन मिति घोषणा भएपनि पोस्टपोन्ड हुँदै आएको यो फिल्म अब माघ २६ गते प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ ।
मनिष अन्जान, काठमाण्डौ, २०७४ आश्विन ९, सोमवार
फिल्म प्रचारमा नहिँड्ने कामेश्वर !
मनिष अन्जान, काठमाण्डौ, २०७४ आश्विन ५, बिहिवार
फिल्म ‘रेसम फिलिली’मा हरियाको चरित्रबाट चर्चित भएका अभिनेता कामेश्वर चौरसियाको अभिनयको सर्वत्र तारिफ हुने गर्छ । मधेशी पात्रको रुपमा विशेषत कामेश्वरलाई दर्शकहरुले पटक-पटक पर्दामा हेर्दै आइरहेका छन् । रंगमञ्च हुँदै मल्टिप्लेक्सका दर्शकका माझ परिचित कामेश्वरले नायिका रेखा थापादेखि नायक सौगत मल्लसम्म दर्जनौ स्टार कलाकारहरुसँग स्क्रिन शेयर गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय उनी चरित्र अभिनेताको रुपमा खुबै चलेका छन् ।